Imashi kanye nokuqaliswa izithakazelo zezombusazwe izinhlanga ezithile noma abantu ababhekene ukudalwa ukunyakaza kwezenhlalo nakwezombangazwe - kwezinyunyana nezinhlangano, alinikezelwanga wombuso kanye party izakhiwo. Umgomo zombusazwe ukunyakaza ibangelwa ngokujoyina amabutho ku izakhamuzi emphakathini esebenzayo.
Indima zezombangazwe emphakathini
Phakathi imvelo zezombusazwe zalo iningi izakhamuzi iqhaza, unganelisekile imisebenzi ezikhungweni ezahlukene zikahulumeni, noma unganelisekile namazinga lomthetho kanye nezinhloso zohlelo. A umehluko abalulekile ukunyakaza zezenhlalo nezombusazwe amaqembu ezombusazwe kuyinto base amorphous nomphakathi. KPIs bamele izimfuno zabantu izintshisekelo ezahlukene setepolitiki, abameleli amaqembu ihlukaniswe kanye yobuhlanga, yamaSoviet, ukubandakanya lesifunda.
Umsebenzi zezombangazwe nokunyakaza, okuhloswe ngokuyinhloko at ekhuluma embuthanweni ewumngcingo yezinhloso zezombusazwe, kanye nokusebenza senzeka ngesisekelo umqondo othize. Lapho ufika ilitshe, notshwala enjalo bathambekele uyayeka noma ushintshwa uba enhlangano yezombusazwe noma party nezinye izidingo. Kuyaphawuleka ukuthi enhlangano yezombusazwe - kungcono nje isigwedlo kwethonya uhulumeni, kodwa hhayi indlela kokunqotshwa kwalo.
izici sici HPD
On the iphuzu setepolitiki yezenhlalo for izimpawu ezilandelayo:
Akukho lwenziwe lwahlangana sisekelo fixed;
base yezenhlalakahle wabahlanganyeli kuyinto ngezikhathi;
the admissibility zobulungu ehlangene nokunyakaza;
azinazo lezi zimpawu isikhungo kanye esisemthethweni yangaphakathi wokwehlayo isakhiwo HPD elinganiselwe isinyathelo amaqembu, amakilabhu, izinyunyana;
iqhaza CPD kwi yokuzithandela ngesisekelo futhi isisekelo Umbutho ubumbano.
Imininingwane zomlando kubonisa indima enkulu nokuhamba ezingokwenhlalo nezombusazwe impilo yomphakathi isimo. ukusebenza isikhathi eside ukugeleza ongasibuyisela yaba ibutho zezombusazwe.
Ngakho, ngokwesibonelo, ukunyakaza kwezenhlalo nakwezombangazwe zihlanganisa amaqembu abantu iqophelo izilwane, imvelo noma kwamalungelo wobuntu.
Ukwahlukanisa izinhlangano kutepolitiki
Okuphokophelwe yi-enhlangano yezombusazwe zinquma ubuntu bakhe. ososayensi Political elandelayo ngezigaba ukunyakaza social usumisiwe:
Indlela esisebenza isimiso sezombusazwe: ngoludala, ashisekela izinguquko futhi izinguquko.
Indawo bohlu zezombusazwe: kwesokunxele, kwesokudla namaphakathi.
izinhlangano Scale: zendawo, bethi basemazweni omhlaba kanye.
Izindlela kanye izindlela zokufinyelela imigomo yabo: okusemthethweni nokungemthetho, loluhlelekile nalolungakahleleki.
Indima ebalulekile kwebalingisi we HPD udlala isikhathi zikhona.
Revolutionary enhlangano yezombusazwe - isenzo mass, ubunjalo collective izibophezele ukuze akhulule lezakhamuzi ngaphansi kwejoka okuyizona, amabutho nelungelo social bangaphansi yokwaba ingcebo yezenhlalakahle kulawulwa labo ukudala ke, hhayi oluphethe indlela yokukhiqiza. Umcondvo lomcoka endzabeni linemibhikisho kakhulu ukusungulwa ubulungiswa emphakathini ngokushintsha izinhlelo ezikhona, nokuqedwa izakhiwo, ukuqaliswa yezinguquko kule ingxenye ukusebenza uhulumeni - ne zezombusazwe "emisha" futhi kumele ithobele iningi labantu.
Ngenxa imisebenzi asebenzayo yemvelo mbuso ka ukunyakaza setepolitiki esungulwe tikhungo tetenhlalo ababhekene ushintsho eliyisisekelo: kukhona ukulungiswa ingqikithi umshini isimo, imfundo, kwezamasiko zokuziphatha. Njengoba ibutho okuholela kule nhlangano wamavukelambuso yiyona zokusebenza kanye nabalimi abancane ekilasini, Democrats, abavamile: bona, ngenxa ukunganeliseki ukululazeka njalo nokukhohlisa phezu ingxenye iziphathimandla, ufuna ukubulala isebenze esimisweni sezenhlalo, ukufeza ukusatshalaliswa okulinganayo kwemithombo kanye wokuqeda udlame.
ososayensi Political nezazi-mlando ziye zaphawula isici elandelayo ukunyakaza yezinguquko zezombusazwe: ukuthuthukiswa yabo kwenzeka emazweni izimpawu ukuvaleka yezinguquko kwezenhlalo. Ngakho, izakhamuzi Angenelisekile yokuphunyula ekubhujisweni wamavukelambuso isimiso sezombangazwe sakhona ekhona.
Imisebenzi izinhlangano ashisekela izinguquko
izinhlangano beziNguquko zezombusazwe nokunyakaza bagxile ushintsho engaguquki kancane kancane ngokoqobo nomphakathi. umthetho Fast kuyinto wokuguqula oda zamanje esungulwe, kodwa kulondolozwe "isisekelo zokuziphatha" yabo.
Imisebenzi mass ukunyakaza ngoludala zezombangazwe okuhloswe ngokuyinhloko ekulondolozeni isimo ezingeni zezombangazwe, ezomnotho, umphakathi kanye nabantu. Ukulondoloza umbuso wamanje, Ababesadla ngoludala ukuvimbela kabusha olukhulu ohlelweni setepolitiki. Conservatism, ephawulekayo izikhundla zawo olunezimiso, ngokuvamile indlela yami yokucabanga ukuze eyayidingida izinkinga zezenhlalakahle.
"Revolution, Goal" A. G. Dugin, umholi we GEOPOLITICS Russian kanye neo-Eurasianism, okuthiwa ukunyakaza mva futhi olandelanayo-wamavukelambuso yesimanje zezombusazwe. kwebalingisi okunjalo kusekelwe isifiso reactionaries ukubuyela umphakathi emasikweni inhlangano yomphakathi, ezomnotho kanye nezepolitiki, okwamanje kubhekwe esifuze yesikhathi esidlule. Njengoba isisekelo ukunyakaza ngoludala-wamavukelambuso kuyinto abantu isiko ngokumelene yesimanjemanje, izinhloso ezithile futhi izinselele zamanje emazweni ahlukahlukene ingehluka.
Zokulwisana, ogama yisakhamuzi awusekelwe emibonweni yabantu nasendleleni yabo lokuthuthukiswa kwamasu eside zezombusazwe, futhi ngesikhathi abekucabanga imisebenzi emiswe kuhulumeni kanye nomphakathi okwamanje, kubhekiselwa kuye ngokuthi ukunyakaza pragmatic zezombusazwe.
ukunyakaza Ukuphikiswa kukhona uhlobo ukuboniswa ukunganeliseki yezenhlalakahle amaqembu ezinkulu nezincane umphakathi. Institute eliphikisayo wesimanje multi-party izinhlelo zombusazwe kwenza kube nokwenzeka ukuba uthole esinye isixazululo ezinkingeni ukuphokophela.
Aphikisayo, njengoba umthetho, limelela izithakazelo amaqembu, losers okhethweni e iziphathimandla emaphakathi futhi imithetho idlala indima enkulu ekulawuleni lesi simo sezombusazwe kuleliya lizwe, nomthelela obalulekile on course isimo sezombusazwe kanye umsebenzi kahulumeni.
ukunyakaza Political - kuba impendulo lemmango wamanje ezifundazweni lepolitiki. Ezimweni eziningi, baze akhiwa ngesisekelo okufunwa umphakathi, namasiko alo kanye nezinkambiso lepolitiki.
izinhlangano zezombusazwe izenzo esivela yiluphi uhlelo kahle kwemandla embuso. Ngakho, "wesitimela impi" ngo-1996, ithatha indawo Kuzbass, kwaba ukunyakaza social uhlamvu kwezomnotho: izishoshovu Ngabamba yokukhokha esifike inkokhelo. Kodwa ngokushesha CAP uye savela kusukela kwavukelwa ku enhlangano yezombusazwe enezici: emva iziqubulo "! Buya wathola imali" wafakwa phambili nxephezelo, njengoba uhulumeni kuthunyelwe ukwesula.
Izibonelo wenhlangano yezombusazwe yayinezinto eziningi zenkathi ethile emlandweni wonke futhi we lawobaba, okuningi. Uhlelo School kuhilela ekutadisheni, mhlawumbe, lelo tulo kakhulu ezinkulu emlandweni Russia - abasebenzi futhi abalimi. Ngakho, esikhathini kwezimboni asebenzayo ezenzeka ekuqa- XIX-XX eminyaka, isigaba sabasebenzi eqala ukukhuluphala ukunganeliseki. Ngenxa imibuthano eside nemiboniso ebhalwe izimfuno zabo siqu yesigaba sabasebenzi wakwazi ukunciphisa amahora ukusebenza, ukuphucula izimo zokusebenza, ukufeza ukudalwa kohlelo umshwalense isimo. Kufanele kuqashelwe ukuthi isici emsebenzini akuyona isici esiyinhloko ephawula CAP. Ngesikhathi inhliziyo ukuqeda noma iziphi izinhlangano kukhona, okokuqala kunakho konke, umqondo, lo mqondo futhi injongo.
ukunyakaza Political eRussia
Mobile, ukuphila kanye nokwethulwa ngokuyiko kwezinhlelo iNkampani esekelwe umsebenzi CPD. ukusebenza kwabo ufaneleke ukwenzisa oko- zomlando, kumagama okuyinto kanje: imicabango yabantu ngaphezulu, isinqumo esifanele. ukunyakaza kwezenhlalo nakwezombangazwe eRussia ethulwa ezihlukahlukene - ngaleli qiniso kufakazela ezingeni lelisetulu nokuhileleka kwezombusazwe abantu futhi ukuvuthwa zomphakathi. Noma kunjalo, kufanele kuphawulwe ukuthi ukusebenza HPD ukwehluka kungase kubonise ukuntengantenga yokubukwa zezombusazwe kanye nezikhundla, izakhamuzi hhayi kuphela, kodwa futhi ngamandla.
Ngakho, ngo-Russian Federation, ukunyakaza yezinguquko zezombusazwe emelelwa bangamakhomanisi olukhulu (CFS, le EIF, Iqembu lamaKhomanisi) kanye ne-National amaBolshevik (NBP Limonov). Indlela azizwa beziNguquko kuyovama amaqembu ezifana iCommunist Party of Zyuganov kanye "Fair Russia". Conservative enhlangano yezombusazwe - iyona ngemibono kakhulu, ukunyakaza social nezinhlangano, "United Russia". Wing Abavukeli olandelanayo siqukethe Eurasians neo- futhi, National amaBolshevik futhi amaqembu Orthodox-monarchist. Ukuze ukunyakaza pragmatic zihlanganisa iqembu lezombusazwe Zhirinovsky kanye ngobuningi lwefa "EdRo".
Zemidlalo, kwezesayensi lobuchwepheshe, kwezamasiko kanye nezemfundo babelwa emahlombe ingxenye yesimiso sezombangazwe ezinjalo, njengoba inhlangano yomphakathi. I ukubonakaliswa ezivamile womsebenzi kwamasiko iwukwenza ndawonye zabasebenzi, imiphakathi kanye nezinhlangano.
Umsebenzi oyinhloko izinhlangano zomphakathi ukunqwabelana anhlobonhlobo izithakazelo izakhamuzi: ngokwesibonelo, basuke ekubhekaneni nezinkinga ezifana ezombusazwe, ezomnotho, nokungcebeleka, nemvelo zokungcebeleka. Ngokuvamile, izinyunyana kanye nezinhlangano okuhloswe ngaso ekushintsheni isiko yomsebenzi, ukuphila nokuzijabulisa kwabantu, kodwa baphinde badlale indima ebalulekile ekuvikeleni amalungelo nezifiso zesigaba sabasebenzi, bawaletha ku ukukhiqizwa nezindaba zomphakathi.
Uhlu izikole Russian lempi. Military zemfundo ephakeme Russia
Ubusisiwe - kuwuhlobo isiSlavonic Esidala elithi "ukuhlangabezana ukubusisa" futhi kulo ibandla labaseTheselonika elithi "wabusisa"
Adhesion - Iyini?
Indlela ukupheka pasta pasta
Uma dream ukugibela esitimeleni, bese ukuphila kwakho kuyoba okusheshayo yimpumelelo.
Yini kungaba esihlalweni nokudoba?